“Waliigalan alaa galan”
“Waliigalan alaa galan” Featured
Oromoon mammaaksa kana yoo mammaaku namni waliigaltee dhabe alatti walbaasa, Diinaaf dabarsee walkenna, gooliidhaaf daandii bana. Qaawwa kanaan ammoo nagaafi tasgabbiin boora'a. Bakka nagaafi tasgabbiin hinjirretti ammoo qotuufi aramachuun, daldaluufi horachuun, bobbaasuufi galfachuun rakkoo keessa seenu.
Haalli sochii jireenyaa kun jeeqamnaan ammoo jireenyi, manniIfi alli namaa akkanumas waliigalaan biyyi jeequmsaan guutama jechuudha. Kanaaf Oromoon “Waliigalan alaa galan” jechuudhaan dhaamsa guduunfaadhaan dhalaa dhalatti darbu kaa'ee ergaa dabarsa.
Rakkoon waliigaltee dhabuu waggoota dheeraadhaaf paartiilee siyaasaa biyya keenyaa gidduu ture oolee bulee gara waliigaltee gamtaa dhabuutti ce'uudhaan goolii dhiheenya kana biyya keenya keessatti sababii hanqina bulchiinsa gaariitiin uumamaa tureef galtee ta'uun adda addummaa uumuuf ykn ammoo aggaammii nageenya biyyaa buuressuuf farreen nageenyaa jeequmsa kanatti hirkatanii taasisan qolachuuf humni mootummaa akka laafu gochuu keessatti shoora isaa ba'ateera.
Kana kan hubate paartiin biyya bulchaa jiru, ADWUIn baatii Amajjii darbe keessa waltajjii mariifi falmii paartiileen biyyaalessaa marti irratti hirmaatan qopheessee paartiilee afeereera. Afeerraa kanarrattis ADWUI dabalatee paartiileen 22 hirmaataniiru.
Haaluma kanaan Amajjii 10 bara 2009 walga'ii jalqabaa taa'aniin haala adeemsa mariifi falmiiisaanii ilaalchisee yaada ka'umsaa dhiheessuun marii ittifufuuf waliigalanii adda ba'aniiru. Eddasii as garuu hamma Roobii dheengaddaatti wanni dhaga'amaa ture hamlee kan nama kutachiisu ture.
Paartiileen kunneen bakka sadiitti qoodamaniiru. Paartiileen mootummaan heera fooyyessuufi jijjiiruutti deemuu qaba yaada jedhu akka haaldureetti qabatanii ka'an uumamaniiru, odeeffannoon jedhan dhaga'ama turaniiru.
Akkuma “Oromoon waliigalan alaa galan” jedhu mariin kan taasifamu waliigaluuf malee addaan ba'uuf miti. Kanaafuu bakka sadiitti ykn lamatti ba'anii waliigalteef mari'achuun maaliif barbaachise? Akkanumas heera carraa kana uumee heddummina paatiileefi marii waligalteetiif bakka kennu diiguuf asumaa a'achi qophiin yaadaa jiraachuun maaliif dhaga'ama gaafiin jedhu sammuu lammii biyya jaalatuu keessatti uumameera.
Utuma ta'eeyyuu heerichi kan saboota, sablammootaafi ummatoota Itoophiyaati malee kan paartii miti. Fooyyessuus ta'e jijjiiruuf mirgi isaa kan ummatoota Itoophyaati. Kanafuu odeefannoon akkasii dhaga'amuun hawaasa nageenya waliigaltee, tokkummaafi misooma biyyattiif yaadan mara yaaddessaa tureera.
Haata'uutii beellama Roobii dheengaddaa irratti wanni ta'eefi dhaga'ame yaaddoo lammii biyya jaalatu maraa ala kan ta'eedha. Innis paartiileen 22n mariif taa'an yaada tokko irratti waliigalanii Guraandhala 17 bara 2009 al sadeessoof walarguuf waliigalaniiru.
Odeefannoon ummanni biyyattii barbaadus waliigalteedha. Waliigaluuf ammoo walloluun barbaachisaa miti. Waliigaluuf waliin falmuun garuu barbaachisaadha. Martinuu yaada guddinaafi misooma biyyattiitiif ni ta'a jedhu mara waltajjiirratti dhiheessuudhaan haala gaarummaasaafi miidhaa isaa walbira madaalchisee gaarummaa yaadasaa caalchisee agarsiisuudhaan, yaada falmitootaa hawachuun ni danda'ama.
Sirni dimokraasiin ammaan tana biyyattiitti ijaaramaa jirus kanuma kan mul'isu yoo ta'u, yaadni harka dhibba keessaa shantamii tokko argate mo'ataadha jechuudha.
Yaadni mo'ataan ammoo yaada ummata maraa ta'a. Kanaafuu falmanii walamansiisuun, gooliifi waraana walitti bananii qabeenya biyyaafi lubbuu lammii ofii balleessuun yaada ofii olaanaa gochuurra kan filatamuudha.
Kanaafuu akkuma, “Namni mana tokko ijaaru citaa walhinsaamu” jedhamu kaayyoon paartiilee hundaa tokkummaa, misoomaafi guddina biyyaa yoo ta'e ilaafi ilaameedhaan waldhaggeeffatanii waan kaayyoo tokkoof nama dhaabu tokkummaa biyyaarratti waliigalanii akka Oromoon jedhutti ...alaa galuun barbaachisaa ta'a.
Torban kana/This_Week 28800
Guyyaa mara/All_Days 1313311